jeudi, 17 décembre 2020 08:52
Nato – Vohipeno : Ravan’ny afo ny 80% ny tanàna noho ny « court-circuit »
Nitrangana haintrano goavana tao Nato Vohipeno ny talata 15 desambra 2020. « Court-circuit » nateraky ny fahan’ny vatoaratry ny « panneau solaire » tamina tokantrano iray no niandohan’ny afo, ka niitatra tamin’ireo trano manodidina. Ravan’ny afo ny 80% ny tanànan’i Nato. 1806 no traboina noho io haintrano io, izay natoby vonjimaika amin’ny EPP sy amin-dry Masera ao an-toerana. Tombanana any amin’ny 250 tapitrisa Ariary ny zavatra simba.Tsy nisy aina nafoy na naratra. (Jereo Sary Tohiny)
Mirongatra izaitsizy ny fanaovana “tsongonofotra” aty Antsiranana amin’izao vanimpotoanan’ny fetin’ny faran’ny taona izao. Lasibatra ny omby sy ny mpiompy toy izay nitranga tao Antanamitarana ny alin’ny alatsinainy hifoha talata teo. Loaran’ireo mpanao ratsy ny karazan-kena izay ilainy amin’ny vatan’ilay biby ary dia avelany eo ny ambiny.Amin’ny fomba mahatsiravina no anaovany izany. Mbola nisy omby velona roa hafa nokasaina hatao toy izany ihany koa tra-tehaka tamin’io toerana io ihany tamin’io fotoana io.
Isan-taona dia miditra amin’ny « Vacances judiciaires» ny Fitsarana eto Madagasikara rehefa misasaka ny volana desambra, ary maharitra iray volana eo izany. Nanambara ny minisitry ny Fitsarana Andriamahefarivo Johnny Richard, androany talata 15 desambra 2020, teny amin’ny CCI Ivato nandritra ny fametraham-panontaniana arahim-baliny izay ifanatrehan’ny Andrim-pajakana mpanatanteraka (Governemanta) sy ireo Solombavam-bahoakan’i Madagasikara, fa nahemotra ho amin’ny 25 desambra ny « vacances judiciaires» amin’ity taona ity mba hahafahana manafaingana ny fitsarana ireo raharaham-pitsarana miangona.
Nanamafy nanoloana ireo solombavambahoaka mivory ao amin’ny CCI Ivato ny minisitry ny Fitsarana Andriamahefarivo Johnny Richard, fa mbola 16 tamin’ireo voafonja nitsoaka ny fonjaben’i Farafangana no karohina amin’izao fotoana izao. Ny alahady 23 aogositra 2020 no vaky ny fonja, ka voafonja niisa 88 tamin’ireo 357 no tafatsoaka. Nisy 20 mahery namoy ny ainy voatifitra, ary 16 no mbola tadiavina.
mardi, 15 décembre 2020 12:47
Faritra Atsinanana : Fampandriana fahalemana
Iaraha-mahalala fa rehefa ankatoky ny fety toy izao dia mirongatra ny asan-jiolahy.Manana ny teny faneva rahateo ireo mpitandro filaminana : « miaro ny vahoaka sy ny fananany ». Nisy andian-jiolahy saika handrava fonenan’olona ny alatsinainy maraina 14 desambra tao Andranomadio, tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana (Police centrale, FIP), ka raikitra ny fifampitifirana, ka jiolahy 02 no maty, ary polisy 03 no voatifitra.
mardi, 15 décembre 2020 12:25
Atsinanana : Fiomanana amin’ny fety
Tsy mbola resy tanteraka ny areti-mandoza Covid-19 ka tohizana ny fitandremana aty an-drenivohitra Betsimisaraka. Na izany aza anefa, dia nanao ezaka ny Faritra Atsinanana tarihin’ny Goverinora RAFIDISON Richard Théodore, nandravaka jiro mirenty ny araben’ny Fahaleovantena. Inona no natao : - Nividy jiro tamin’izay mba fahefa-mividiny ny faritra, ka noravahana ireo vodivoanio manomboka hatreo amin’ny «esplanade» ka hatramin’ny manoloana ny Lapan’ny Faritra.- Nampahalalàna ny sehatra rehetra manamorona ny araben’ny Fahaleovantena izany hetsika izany, ka namporisihina mba hanao ireo izay afaka manao izany. Ny ilàna azy :
Nisy androany ny fanangonana ireo fanomezana avy amin'ny malalatanana ho an'ireo Malagasy ianjadian'ny tsy fanjariantsakafo any atsimo. Nisy olontsotra, olomboafidy, fikambanana, tanora, mpandraharaha tonga nanatanteraka fitia tsy mba hetra tao amin'ny Magro Behoririka Antananarivo. (Jereo Sary Tohiny)
Ny alahady 06 Desambra teo, taorian’ny fitsidihana ny Nosy Alagnana Ile-Aux-Prunes, dia nitsidika ny « port fluvial » etsy Manangareza ny Minisitry ny Fitanterana sy ny Fizahan-tany ary ny Famantaranana ny toetr’andro RANDRIAMANDRANTO Joel, sy Andriamatoa Tale Jeneralin’ny APMF, na Agence Portuaire Maritime et Fluvial, Andriamatoa RANDRIANANTENAINA Jean Edmond. Nanotrona hatrany izao fitsidihana izao ireo tompon’andraikitra eto an-tanàna, notarihin’ny Goverinora RAFIDISON Richard Théodore, ny Préfet Razafiarison Jean Jugus ary ny Ben'nu Tanàna RAKOTONIRINA Nantenaina. Tsy isalasalàna ny manaiky ny voalazan’ny mpisehatra ara-pizahan-tany fa VOKATRA SANGANY aty Atsinanana ny Lakandranon’ny Pangalanes, izay mitety faritra 04 ary kaominina maro.
Ho fandraisana anjara amin’ny ady amin’ny kere dia nanolotra fiara tsy mataho-dàlana miisa 6, hampiasain'ny "Centre de Coordination Opérationnelle contre le Kere", ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola, ho fanafainganana ny asa izay hotanterahina any amin’ny faritra Atsimon’ny nosy. Nambaran’ny Praiminisitra fa miha-maro ny olona ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo, ary misy amin’ireo zaza Malagasy no mamoy ny ainy vokatr’izany. Ankehitriny dia nitondra fomba fiasa vaovao amin’ny fanampiana ny any Atsimo ny fitondram-panjakana, ka nametraka rafitra toy ny tamin’ny ady tamin’ny valanaretina Covid 19, dia ny CCO-K izany. Mazava ho azy, hoy ny Praiminisitra, fa mila fitaovana, tetibola, ary olona hitantana azy ny CCO-K, indrindra ny fiaraha-miasa amin’ireo tompon’andraikitry ny Faritra iorenan’ny ivon-toerana.
vendredi, 11 décembre 2020 12:13
Fampodiana ireo teratany Malagasy : Nisy 75 tonga avy any Arabia Saodita
Tonga ny alarobia 09 desambra 2020, teto an-tanindrazana ireo teratany Malagasy miisa 75 avy any Arabia Saodita araka izay tapaka tamin’ny Filankevitry ny Minisitra ny 11 novambra 2020. Niara-niasa tamin’ny fanatanterahana izany fampodiana izany ny Masoivohon’i Madagasikara any Riyad sy ny biraon’ny “Organisation Internationale pour les Migrations” (OIM). Anisan’ny masontsivana namaritana ireo teratany malagasy miisa 75 tafody eto an-tanindrazana ny fanasokajiana azy ireo ho marefo sy niharan’ny herisetra. Miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana manoloana ny fivoaran’ny valanaretina maneran-tany sy ny fisokafan’ny sisitany ny fampodiana ireo teratany Malagasy maniry ny hiverina an-tanindrazana. (Jereo Sary Tohiny)